Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Uncedo olufunwayo kwii-Airlines eziManyeneyo: Ugonyo kuphela!
Airlines • uhambo ngomoya • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • udliwano • iindaba • Tourism • uthutho • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Imfuneko yokuGonywa kwee-Airlines
I-United Airlines ibhengeze namhlanje ukuba izakufuna ukuba abasebenzi bafumane ugonyo lwe-COVID-19 ungadlulanga owe-25 ka-Okthobha u-2021, kungenjalo baya kuba semngciphekweni wokupheliswa.
I-United iba yenye yeenkampani ezandula ukubeka isigunyaziso sokuba abasebenzi bazo mabagonywe i-COVID-19.
Ngaba oku kusemthethweni? Ngaba umqeshwa angagxothwa ngenxa yokwala ukuthobela?
Ngaba ukhona umahluko phakathi kweenqwelo moya kunye nevenkile xa kuthelekiswa nezinye iimeko zengqesho?
U-Keith Wilkes, iqabane lezabasebenzi nengqesho / labanini zabelo kwiqumrhu lezomthetho lesizwe e-Hall Estill, ebesoloko efaka umnxeba kwiinkampani ezizama ukufumana iimpendulo kwimibuzo esemthethweni malunga nokuba i-United okanye hayi, okanye nayiphi na loo nkampani, ingagunyazisa ugonyo abasebenzi.
UWilkes uphendula imibuzo ebalulekileyo yento eyenza isibhengezo se-United sahluke kwezinye iinkampani ezithathe amanyathelo afanayo kule veki.
“I-United Airlines ibhengeze namhlanje ukuba iyazibandakanya kuluhlu olukhulayo lweenkampani ezixelela abasebenzi bazo ukuba bazifumane ugonyo lwe-COVID-19 okanye baphelelwe yimisebenzi. Isibhengezo se-United siphawula inqwelomoya yokuqala enkulu yase-US yokuphumeza igunya elinjalo kubasebenzi bayo abangama-80,000, abaya kuba kude kube sekupheleni kuka-Okthobha ukubonelela ubungqina bokugonywa okanye, ngaphandle kwemida embalwa, ukupheliswa kobuso, ”utshilo uWilkes.
Nantsi into uWilkes awayefanele ukuba abelane ngayo kudliwanondlebe:
Q: Olunye ukhathalelo olungelulo lwempilo olunikezela abaqeshi, njengoGoogle noFacebook, benze izibhengezo ezifanayo kule veki. Yintoni, ukuba kukho nantoni na, ebalulekileyo ngokujoyina i-United kwinqanaba lokugonywa kwabasebenzi balo?
UWilkes: Ukongeza ekubeni ngowokuqala kwimizi-mveliso abathe izigidi zabantu neenkampani e-US bathembela kuyo yonke imihla, abasebenzi base-United-ngokungafaniyo neenkampani zobuchwephesha kunye neebhanki-banabasebenzi abaninzi. Ngokusebenzisa izivumelwano zokudibana kunye nemithetho yezabasebenzi, amalungu emibutho yabasebenzi bahlala befumana ukhuseleko olukhulu ngokuchasene nemigaqo-nkqubo emitsha ebekwe ngabaqeshi babo enokuthi ichaphazele ukuba ngaba abasebenzi bayayigcina imisebenzi yabo.
Q: I-United ikwazi njani ukunyanzelisa igunya elitsha lokugonya kubasebenzi bayo bemanyano?
UKhenketho lwaseJamaica: uKhuseleko lwe-Spa kunye neMpilo kwiNcwadana entsha
IGrenada Underwater Sculpture Park igqibezela ukulungiswa
Jamaica Cruising kwi Return e Montego Bay
I-EU yamkela ipilisi entsha ye-Merck yeLagevrito njenge-COVID-19...
Unyango lwe-Hepatitis C usebenzisa uvavanyo olutsha lwe-Origami Diagnostic
I-60% yabantu baseMelika ayinakwenzeka ukuba bahambe ngeeholide
I-White Sands i-Bahamas i-NCAA ibuyisela isimemo e-Ocean ...
Iindawo eziphezulu ezili-10 ezisebenzela abantu abazimeleyo ehlabathini
Igqala leentaka uHerbert Byaruhanga ngumongameli omtsha we...